जानौं सती अनुसूयाको वास्तविक अर्थ के हो ? | NepalDut
जानौं सती अनुसूयाको वास्तविक अर्थ के हो ?
आजकाल हामी सतीको नाममा नारीलाई जिउँदै जलाइन्थ्यो भन्ने कथा सुन्छौं । वेदको उपमा दिएर वेदद्वारा सती प्रथाको प्रमाणित गर्ने प्रयास गरिँदैछ । तर, वास्तवमा सतीको तात्पर्य के हो त ?
एकपटक नारद देवीहरु लक्ष्मी, पार्वती र सरस्वतीकोमा पुगेर सती अनुसूयाको महिमाको बयान गर्न थाले । नारदले भने, ‘आज धर्तीमा सती अनुसूयाको जति प्रचार छ, जति प्रभाव छ, त्यति अन्य कुनै नारीको छैन । पतिको प्रति उनको जो निष्ठा छ, पति प्रति उनको जो एकाग्र भाव छ, जो उनको श्रद्धा र विश्वास छ त्यो अतुलनीय छ ।’
यो सुनेर पार्वती, लक्ष्मी र सरस्वतीलाई ईर्ष्या हुन थाल्यो । उनीहरुले आफ्नो स्वामीलाई सती अनूसूयाको परिक्षा लिन आग्रह गरे । शिव, ब्रह्मा र विष्णु ब्राह्मणको भेषमा सती अनुसूया भएको ठाँउमा पुगे । अनूसूयालाई सतीत्वको परिक्षा लिन उनीहरुले भने, ‘हामीलाई निर्वस्त्र भएर भोजन गराउ ।’
सती अनुसूयाले आफ्नो सतीत्वको प्रभावबाट तीनै देवलाई शिशु बनाइन् । उनीहरुलाई बालक बनाएर स्तनपान गराइन र उनीहरुलाई कोक्रोमा झुलाउन थालिन् । तब नारदले तीन देवीलाई भगवान शिव, ब्रह्मा र विष्णु बालक बनेर अनुसूयाको कोक्रोमा झुली रहेको सुनाइदिए ।
जब देवीहरु लक्ष्मी, पार्वती र सरस्वती त्यहाँ पुगे । तब आफ्ना पतिहरुलाई साना बालक बनाइएको देखे। अब बालकहरुलाई आफ्नो पति कसरी भन्नु उनीहरुलाई अफ्ठ्यारो लाग्यो । जो पुत्रवत् बने उनिहरुलाई पति कसरी भन्नु । ठूलो दुविधामा तीन देवी परे ।
अन्तमा तीनै देवीहरुले नतमस्तक भएर समर्पित भवले अनुसूयासँग प्रर्थना गरे। प्रर्थनासँगै अनुसूयाले आफ्नो सतीत्वको प्रभावले तीन बालकलाई पुन : यथावत स्वरुपमा बनाइन् । तब तीन देवीहरुले आफ्नो पति प्राप्त गरे ।
भन्नुको अर्थ कुनै महिलालाई जिउँदै जलाउ भन्ने हैन । श्रीरामका पिता महाराज दशरथको जब देहान्त भयो र उनको जब अन्तिम संस्कार भइरहेको थियो तब कैकेयी, सुमित्रा र कौशल्या आग्निमा जल्न गएनन् । सतीको अर्थ पतिको चितासँगै जल्नु हैन । सतीको मतलब नारी आफ्नो पति प्रति समर्पित हुनु हो । पतिप्रति पूर्णरुपमा समर्पित र निष्ठावान नारीलाई नै सती भनिन्छ ।
मुगलकालमा यो शब्द यसरी बदलियो कि जो नारी आफ्नो पतिप्रति समर्पित छ, उ दुश्मनबाट, दुष्टबाट आफ्नो सतीत्व रक्षा गर्नको लागि पतिको चितामा आफ्नो प्राणको बलि देने गर्थिन् । तर यसको मतलब जबर्जस्ती कुनै नारीलाई समातेर जिउदै जलाउनुस् र सती भइन् भन्नु भने पक्कै पनि हाेइन। सतीको वास्तविक तात्पर्य समर्पणसँग छ । सती शब्दबाट यो थहा हुन्छ कि पत्नी आफ्नो पति प्रति पूर्णरुपमा निष्ठावान् छिन् ।
विस्तारै विस्तारै समय र परिस्थितिहरु बदलिएसँगै सतीको अर्थ पनि परिवर्तित भयो तर यसको मूल अर्थ यही हो कि नारी आफ्नो पति प्रति निष्ठावान छिन् ।
केही कालखण्डमा जो मानिस स्त्रीलाई जबर्जस्ती जलाउँथे त्यो यसकारण गरिन्थ्यो कि स्त्रीको सम्पूर्ण सम्पति उनीहरुले प्रप्त गर्न सकुन् । स्वार्थमा वशीभूत भएर कुटुम्बले यस्तो गर्थे । आजकाल त सती शब्द को यति अनर्थ भएको छ कि जसको परिणाम चारै तर्फ द्वन्द मचिएको छ । यसै प्रकारका अनेकौ समाचार पत्र पत्रिकामा छापिने गरेका छन । साथै प्रमाणिकताको लागि वेदको दुहाई दिइरहेको छ । तर हामी विर्सिरहेका छौ की वास्तवमा सतीको मतलब आफ्नो पति प्रति समर्पित भाव राख्नु हो ।
यसै प्रकार भक्तिमा पनि भगवान प्रति आफ्नो इष्टदेवको प्रति समर्पण भाव राख्नु अत्यन्त आवश्यक छ । जब सम्म हामी भित्र समर्पण भाव हुनेछैन तब सम्म हामी आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि असफल हुनेछौ ।